Amakhasi amahle kakhulu wokubuka ibhola ku-inthanethi MAHHALA ngaphandle kokubhalisa | Izindaba zamagajethi
Bukela ibhola online mahhala
UPablo Aparicio | | Ukuphanga
Esikhathini esingengakanani esidlule, omabonakude besifunda baseSpain yibona abanqume ukuthi yimuphi umdlalo webhola abazowusakaza. Lokhu kusho ukuthi uma lelo sonto bekukhona iReal Madrid - iBarcelona, ​​u-100% uqinisekile ukuthi sizolibona livuleka. Kepha, njengayo yonke impilo, ezemidlalo seziyibhizinisi elihola ngokuya phambili ezinkampanini zokuqukethwe futhi manje sesingabuka umdlalo owodwa ngeviki, kepha akekho noyedwa onakekelayo, ngoba basakaza imidlalo yamaqembu omugqa ngezigaba. Uma othile elithanda kakhulu ibhola, kuyaqondakala ukuthi baqasha iphakethe lezemidlalo kwinsizakalo yethelevishini kepha, kulabo bethu abafuna ukubuka umdlalo ngezikhathi ezithile, into enhle kakhulu ukuthi bukela ibhola online mahhala.
Ngezansi sizophakamisa amanye amawebhusayithi lapho ungakwazi khona bukela imidlalo eku-inthanethi mahhala ngaphandle kokubhalisa. Amakhasi ahlelwanga ngokulandelana kwekhwalithi noma ngokubaluleka, kepha engezwe njengoba besivakashile. Kungcono ukuthi zilawulwe, ikakhulukazi uma esikufunayo ukubona umdlalo obalulekile ongahle ube kumawebhusayithi amaningi, kepha ngezixhumanisi ziphansi.
Zama inyanga yamahhala: Thola inyanga yamahhala yebhola kwi-DAZN ngaphandle kokuzibophezela ngokuchofoza lapha
Ngaphambi kokuthi siqale, sizokutshela ngobuhle nobubi bokubuka ukufana kwebhola online. Ekuqaleni konke kuzwakala kumnandi kakhulu, futhi kungaba njalo, kepha futhi kungacasula.
1 Izinzuzo zokubuka ibhola online mahhala
2 Nebubi ukubukela imidlalo inthanethi mahhala ngaphandle kokubhalisa
3 Roja Directa, okudala ukubukela ibhola online mahhala
6 I-Red Direct Online
8 Ukusakaza Ibhola
Izinzuzo zokubuka ibhola online mahhala
Kumahhala. Kunengqondo, akunjalo?
Siyabona cishe noma yimuphi umdlalo ibhola likanobhutshuzwayo. Okuhle ukuthi abagcini ngokubeka izixhumanisi zemidlalo kwiligi yethu, kepha singathola nemidlalo kwamanye amaligi, amaqembu esizwe, njll.
Sidinga kuphela isiphequluli kusuka ku-Intanethi.
Nebubi ukubukela imidlalo inthanethi mahhala ngaphandle kokubhalisa
Izinga lekhwalithi yesithombe nomsindo alilihle neze. Kuyaqabukela ukuthola isixhumanisi esinomfanekiso omuhle nekhwalithi yomsindo, kepha kunengqondo uma sibheka ukuthi sikubuka kusakazwa futhi (cishe) kuqondile.
Ukukhangisa okweqile. Amawebhusayithi asinikeza imidlalo yebhola agcwele ukukhangisa, kangangoba kungacasula. Kwesinye isikhathi, iwindi elivelayo livela phakathi nomdlalo futhi kufanele silinde imizuzwana eyi-10 ukulivala, nokungenye, kwesinye isikhathi kuvela u-X wamanga ukuze sichofoze ekukhangiseni.
Ngezinye izikhathi kufanele funa okungaphezu kwe-akhawunti, nayo engaba yithemba. Uma umdlalo ungowokudala weligi yaseSpain, sizoba nezixhumanisi eziningi, kepha eziningi zizokuwa ngenkathi sizibuka. Kungakho kulolu hlu sikunikeza izinketho eziningi kangaka? Kuhle ukubekezela.
I-Los izixhumanisi ziyawa. Noma kunalokho, bangawa.
Kuthatha Flash Player. Ngisho ne-Adobe ithe ukuyikhipha ngoba ingavikelekile. Kungaba okungajwayelekile ukuthola iwebhusayithi enikeza imidlalo ebukhoma esebenza ne-HTML5.
Akukhona 100% bukhoma. Into ejwayelekile kakhulu ukuthi siyibuka imidlalo, ngethemba, sekwephuze ngomzuzu wemizuzu. Yini akuyona inkinga? Uma unomakhelwane abamemeza bathi "Igoli" lapho beshaya igoli, uzokwazi ngaphambi kokuthi uzibonele ngokwakho.
Ungayibuka kanjani ibhola online ngokusemthethweni
Roja Directa, okudala ukubukela ibhola online mahhala
UDirect Red ungumakadebona kulokhu ukubona ezemidlalo ze-inthanethi. Bazamile ukuyivala kaningi, okukhombisa amandla ayo okubuka imidlalo online mahhala ngaphandle kokubhalisa. Sinemidlalo evela kuwo wonke amaligi hhayi lokho kuphela, ngoba sinezixhumanisi zemidlalo eminingi. Inikeza izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi amaningi abamba imicimbi yezemidlalo. IDirect Red kufanele ibe sesikhundleni esivelele kulolu hlu.
Uma ivinjelwe eSpain, ukuthi kuhlale kunokwenzeka ngemuva kwezikhalazo ezitholakele, ungafinyelela i-rojadirecta.me kusuka indlu engaziwa noma ngesiphequluli se-Tor (kepha ngicabanga ukuthi i-Anonymouse ikhululekile).
Lapho ikhasi elifana ne-Direct Red lifaka izixhumanisi eziningi ezivela kuwebhusayithi futhi zibukeka zizinhle ngaphezulu, kuyathakazelisa ukubheka leyo webhusayithi. Lokho kwenzeka ngeFutbolarg, a Iwebhusayithi yase-Argentina enikeza ukufana kwamahhala kwe-inthanethi kwazo zonke izinhlobo. Ukuphawula kuvame ukuba nokugqamisa kwe-Argentina, kepha lokho akunandaba. Kuyinto enhle, ngoba i- imibono inenhloso ethe xaxa uma siyibuka kusuka eSpain ngoba abanalo iqembu eliyintandokazi laseSpain.
I-Intergoles yiwebhusayithi esisinikeza izixhumanisi ezikwamanye amawebhusayithi, njengeRoja Directa noma iPirlo TV. Lesi sakamuva sidinga ukubhaliswa, ngakho-ke kufanelekile ukuvakashela ama-Intergoles futhi ubuke imidlalo yePirlo TV ngaphandle kokubhalisa.
I-Red Direct Online
Inegama elicishe lifane nelokuqala kulolu hlu, kepha akuyona iwebhusayithi efanayo noma abanikazi abafanayo. IRoja Directa Online isinikeza ukufana kwamahhala kwebhola kwanoma yiliphi izwe noma umncintiswano, womabili amaqembu esizwe namaqembu, womqhudelwano weligi nowezwekazi. Kuwebhu baxwayisa ngokuthi izixhumanisi zizobekwa ngaphambi nje kokuba umdlalo uqale, ngakho-ke kungcono ukufaka imizuzu ngaphambi kwalokho bese uvuselela isiphequluli sewebhu.
Ikhasi elanconyelwa kimi kudala, ngilithola liheha kakhulu futhi linomklamo omuhle yiLivefootballol. Uma sibheka ohlangothini lwesobunxele, siyabona ukuthi kukhona cishe wonke amaligi ebhola, okungenani awaseYurophu. Uma sichofoza kunoma iyiphi iligi, sizobona ukuthi ayinalutho ngaphandle kwalapho kuba usuku lomdlalo. Lokhu kwenza iwebhu ibe ngcono kakhulu ngokubonakala, kepha ishiya ukunambitheka okubi emilonyeni yethu esikususayo lapho kunomdlalo. Ngaphandle kokungabaza, ngicabanga ukuthi kufanele sikugcine kuzintandokazi zethu uma sikuthanda bukela ibhola online mahhala ngezikhathi ezithile.
Umhlahlandlela ocacile wokubuka lonke ibhola kulo nyaka eSpain
Okunye okunconywe kakhulu ukusakazwa kwebhola. Umklamo wekhasi, unhlokweni eceleni, awukhangi kangako, kufanele kushiwo. Noma kunjalo, okusithandayo yizixhumanisi futhi ekusakazweni kweBhola sizokwazi ukubona ukufana kwamaligi abaluleke kakhulu njenge-English, iSpanish, i-Italy noma iJalimane. Njengoba kungenakuba ngenye indlela kuwebhusayithi enikezelwe kumdlalo omuhle, futhi ikhombisa ukufana kwamaqembu esizwe noma imincintiswano yezwekazi.
Yikuphi kuzo zonke izinketho onakho ukubuka ibhola online mahhala? Ngabe kukhona okunye ofuna ukungeza esingakusho ukuze sikwazi bukela imidlalo eku-inthanethi mahhala ngaphandle kokubhalisa? Sitshele ngokuhlangenwe nakho kwakho futhi uma ungakabi nesiqiniseko sokuthi ulibuka kuphi ibhola, khumbula ukuthi i-DAZN ikunika inyanga yamahhala uma ubhalisa manje kulokhu kukhushulwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ukuphanga » Bukela ibhola online mahhala
UToshiba wethula amadrayivu e-SSD ane-30 TB yesikhala
I-Uhans Note 4, ene-3GB ye-RAM engaphansi kwama-euro angu-100 [BUYEKEZA]